Serenity (2005) - Happybox
Serenity (2005) IMDb……7.9
အနာဂတ္ကာလ ၂၆ ရာစုႏွစ်မှာ ကမ္ဘာဂြိုလ်ဟာ ဂြိုလ်ပေါင်းများစွာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြပြီး အဲဒီဂြိုလ်တွေမှာ အခြေချနေထိုင်ဖို့ လူတွေကို လိုအပ်တာ ထောက်ပြံ့ ပီး နေစေပါတယ် ……
ယဉ်ကျေးမှုမြင့်မားနေတဲ့ ဒီလူ့အဖွဲ့အစည်းကို ဂြိုလ်များဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ကနေ အုပ်ချုပ်ပါတယ်
အဲဒီမှာ လွှတ်တော်ဟာ သိပ္ပံစမ်းသပ်မှုတွေ များစွာလုပ်နေပြီး စမ်းသပ်ခံထဲတွေထဲမှာ ရစ်ဗားတန်ဆိုတဲ့ ၁၇ နှစ်အရွယ် ကောင်မလေးလည်း တယောက်အပါအဝင်ပေါ့ …. ဒီကောင်မလေးမှာ ထူးခြားတဲ့စွမ်းအင်တွေရှိလေတော့ သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့က အဆုံးမဲ့စွမ်းအင်ရရှိအောင်ကြိုးစားပြီး လက္နက္သဖြယ္အသုံးခ်ဖုိ႕ႀကိဳးစားလာႀကတယ္….
အဲဒီထဲကေန သူမရဲ႕အကို ဆိုင်မွန် တန် ဟာ သူမကို ရအောင် ကယ်ထုတ်သွားခဲ့ပြီး Serenity ဆိုတဲ့ ယာဉ်နဲ့ ထွက်ပြေးကြတယ်… အဲဒီလို သူတို့ ထွက်ပြေးသွားတဲ့နောက် လွှတ်တော်အဖွဲ့ကနေ လူသတ်ရာမှာတော်လွန်းတဲ့ ရှင်းလေးရေးသမားတွေကို လွှတ်လိုက်ကြတယ်…. သူတို့တွေလွတ်မြောက်ပါ့မလား….. ရှုတ်ထွေးပွေလီလှတဲ့ ၂၆ရာစုရဲ့ အဖွဲ့အစည်းပေါင်းများစွာရဲ့ရန်ကရော လွတ်မြောက်အောင်ဘယ်လိုရုန်းကန်ကြမလဲ….
ရုပ်ရှင်အထူးပြုလုပ်ချက်ကောင်းကောင်းနဲ့ ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ သိပ္ပံရုပ်ရှင်ကားကိုမှ သဘောကျတယ်…အက်ရှင်ခန်းတွေလည်းပါမှဖြစ်မယ်…Rating တွေလည်း လန်းရမယ်… ဇာတ်လမ်းလည်းမိုက်မှ အဆင်ပြေမယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး…. နင်းကန်ကောင်းကြောင်းညွှန်းဆိုပါရစေ….
ဇာတ်လမ်းအညွှန်းကိုတော့ Channel Myanmar မှကူးယူဖော်ပြပါတယ်…